Uncategorized Archives - Lifestyle Myanmar
နေ့စဉ်ကျင့်သုံးသင်တဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွှတ်တဲ့ အလေ့အကျင့် ၆ ခု
တစ်ခါတစ်လေမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ realationship သက်တမ်း ကြာလာတာနဲ့အမျှ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အနားမှာရှိနေပေမယ့် မိုင်ထောင်ချီဝေးသနေလိုမျိုး ခံစားရတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သက်တမ်းရှည်ကြာလာတဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေမှာ အများဆုံးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုသက်တမ်းရှည်တဲ့ ဆက်ဆံရေးမှ ာဝေးကွာသလို ခံစားနေရတာက ရှေ့ဆက်ဖို့အတွက် အရမ်းထိခိုက်လွယ်ပါတယ်။ ချစ်စခင်စကြင်နာစမှာ အရမ်းရင်းနှီး​နေ​ပေမယ့် နောက်ပိုင်းကြာလာတဲ့အခါ အမူအရာ​တွေ​ပြောင်းသွား​ပြီး အေးစက်စက် ဆက်ဆံရေးသာ ကျန်ရှိတတ်ကြတာ သဘာဝပါပဲ။ ဒီလိုအေးစက်နေတဲ့ ဆက်ဆံရေး တစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်...
ကိုယ့်ရဲ့ ရာသီခွင်အပေါ်အခြေခံထားတဲ့ အိမ်မက်ထဲက မိန်းကလေးပုံစံ
လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ရာသီခွင်အလိုက် မိန်းကလေးတစ်ယောက်အပေါ် ကြိုက်နှစ်သက် မျှော်လင့်ထားတဲ့ ပုံစံတွေက မတူညီနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ ရာသီခွင်ဂြိုလ်အရ စွဲလမ်းတတ်တဲ့ စိတ်နေသဘောအထား ကွဲပြားကြတဲ့ အတွက် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ မိန်းကလေးအမျိုးအစားတွေနဲ့ ရာသီခွင်အလိုက် ဘယ်လိုကြိုက်နှစ်သက်လည်း ဆိုတာ ရှာဖွေလိုက်ပါ။ ၁။ Aries Aries ရာခွင်ထဲကယောက်ျားတွေက နေရာတကာတွင် အမြဲ စွန့်စားခန်းဝင်နေတတ်ပြီး၊ အခွင့်အရေးရတိုင်း ဘဝကို တတ်ကြွစွာ ဖြတ်သန်းတတ်တဲ့...
လန်ဒန်မြို့တော်ဆိုတာနဲ့ လူကြီးတွေသာမက ကလေးတိုင်းကပါ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေတဲ့ မြို့တော်တစ်ခုပါ။ သွားရောက်လည်ပတ် လို့လည်းကောင်းပြီး ယဉ်ကျေးမှုအရ အတက်ကြွဆုံးမြို့တွေက တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ရုံတွေနဲ့ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့တွေက အလွန်ရေပန်းစားပြီး အင်္ဂလိပ်မြို့ကြီးများတွင် အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တာကြောင့် လန်ဒန်က ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူမျိုးပေါင်းစုံ နေထိုင်မှုအများဆုံးထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုမျိုးစုံနဲ့ လူမျိုးစုံရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု မြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ လန်ဒန်ကို...
သွေးတွင်း သကြားဓာတ်ကို လျှော့ချပေးတဲ့ အလေ့အကျင့် ၆ ခု
ကမ္ဘာပေါ်က လူအများစုဟာ သွေးတွင်း သကြာဓာတ်များတာကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဆီးချို၊သွေးချို ရောဂါကို အနည်းနဲ့ အမျှ ခံစားနေကြရပါတယ်။ ဒီရောဂါခံစားလာရတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ နေစဉ်အလေ့အကျင့်တွေကို ပြောင်းလဲဖို့ မကြိုးစားပဲ ဆေးရုံဆေးခန်းတွေ ပြနေပြီး ဆေးဝါးများစွာကို သောက်သုံးနေရ တတ်ပါတယ်။ ဆေးဝါးတွေနဲ့ သွေးတွင်းဂလူးကို့စ်တွေက ဆီးချိုရောဂါကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သော်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ်အလေ့အကျင့် တွေကိုလည်း...
လှလှပပလေးအိပ်စက်ပြီး ကြည်ကြည်လင်လင်လေးနှိုးထလာစေဖို့ အကြံပြုချက် (၇) ချက်
သင်ရဲ့ မနက်ခင်းတွေကို လှလှပပလေးနဲ့ နှိုးထလာချင်လား? ဒီ့အတွက် အကြံပြုချက်တစ်ချို့ရှိပါတယ်။ ၁။ Moisturizer ညအိပ်ရာဝင်ချိန် ရေချိုးပြီးတိုင်း သင်အကြိုက်ဆုံး moisturizer တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ ရေဓာတ်ကို ထိန်းသိမ်းပါ။ အကယ်၍ သင့်မျက်နှာကို ချောမွေ့အောင်လုပ်ဖို့ ယုံကြည်ရလောက်တဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကို ရှာမတွေ့သေးဘူးဆိုရင် အုန်းဆီကလည်း သင့်အတွက် ရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခုဖြစ်မှာပါ။ ၂။ Growth Serums ဖြင့် နောက်တဆင့်တက်ပါ နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့...
အိပ်ရာမဝင်ခင် တရားထိုင်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
အိပ်ရာမဝင်ခင် တရားထိုင်ခြင်းက အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိစေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အိပ်ပျော်ဖို့ ခက်ခဲနေသူတွေအတွက်ပါ။ ထို့အတူ အိပ်စက်မှုပြဿနာမရှိသူတွေမှာလည်း ဒီနည်းနဲ့ ကောင်းမွန်စွာ အနားယူနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကောင်းကောင်းအိပ်မပျော်နိုင်ကြတဲ့ လူသန်းပေါင်းများစွာရှိကြပါတယ်။ ဒါက နေ့စဉ်ဘဝရဲ့ ဖိအားတွေ များလာတာကြောင့်ပါ။ တစ်ခါတရံမှာ အိပ်ပျော်ဖို့အတွက် အချိန်အကြာကြီး ယူရပြီး တစ်ခါတစ်ရံမှာ ညဘက်် အိပ်ရာက နိုးတာ (ဒါမှမဟုတ်) ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တဲ့ ခံစားချက်နဲ့...
Blonde color ကို ဆိုးဖို့ ဘာတွေလိုအပ်လဲ? တလက်လက်တောက်ပနေဖို့ရော ဘာတွေလုပ်ရမလဲ?
ဆံပင်ရွှေရောင်ပြောင်းဖို့ စဉ်းစားဖူးလား? ဒါမှမဟုတ် လာမယ့်ရာသီမှာ ဆံပင်ပုံစံအသစ်ကို ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားနေတာလား? သင့်အနေနဲ့ သဘာဝအတိုင်း အစကတည်းက ဆံပင်အရောင်၊ အနက်ရောင်ကနေမှပဲ ဆံပင်အရောင်ပြောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပုံစံလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင် အလှပြင်လုပ်ငန်းတွေမှာ ၁၀ နှစ်ကျော်ကြာအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ဦးဆီကနေ တန်ဖိုးရှိတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကနေ မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ ဆံပင်တွေအားလုံးကို ရွှေရောင်ပြောင်းလိုက်သင့်လား? သင့်ဆံပင်ကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ။ သင့်ဆံပင်က ဘယ်လောက်ပါးလဲ? ဘယ်လောက်ထူလဲ? သဘာဝအရောင်ကရော...
ရက် (၉၀) ကြာ အရက်မသောက်ဘဲနေလိုက်ရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ
သင်ဟာ အရက်စွဲလမ်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အရက်အလွန်အကျွံသောက်ရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်ကောင်းကောင်းသိပြီးလောက်ပါပြီ။ အရက်ပုံမှန်သောက်နေတဲ့လူတစ်ယောက် အရက်ဖြတ်ဖို့/နားဖို့ဆိုတာက လွယ်ကူတယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ အရက်မသောက်တော့ရင် ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေရှိလာနိုင်မလဲဆိုတာကိုပဲ မျှဝေပေးပါတော့မယ်။ ၁။ ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းတွေ တိုးတက်လာပါမယ် အရက်တွေ ပုံမှန်သောက်နေသရွေ့ ပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်နိုင်ချက်တွေ ချနိုင်ဖို့ဆိုတာ အမြဲတမ်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ နောက်ပိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းတွေ ဆုံးရှုံးလာရင် ပိုဆိုးလာပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ အရက်သောက်တာကို နားလိုက်မယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့...
အောင်မြင်နိုင်ခြေအမြင့်မားဆုံးသော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပိုင်ရှင် ENTJ တွေရဲ့ ကိုယ်ကျင့်လက္ခဏာ (၁၀) ခု
The Myers Briggs Type Indicator ဆိုတာ extroversion (သို့) introversion၊ အာရုံခံနိုင်စွမ်း (သို့) အလိုလိုသိစိတ်, တွေးခေါ်ခြင်း (သို့) ခံစားချက်၊ ဝေဖန်သုံးသပ်ခြင်း (သို့) သိမြင်မှုအပေါ် အခြေခံပြီး လူတွေရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေကို စမ်းသပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ENTJs ကို “စစ်သေနာပတိ”တွေအဖြစ် လူသိများပြီး လူဦးရေ ၃ % ခန့်သာ...
သင်အကြိုက်ဆုံးတိရစ္ဆာန်က ပြောပြမယ့် သင့်ရဲ့ ကိုယ့်ရည်ကိုယ်သွေးတွေအကြောင်း
လူတွေဟာ သဘာဝအားဖြင့် ချစ်ခြင်းနှင့် အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်းမှာ အားကောင်းသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့အားလုံးက မိခင်ကမ္ဘာကြီးရဲ့ မိသားစုအစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်မတို့အားလုံးမှာ အချစ်ဆုံးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ရှိတယ်ဆိုတာ အံ့ဩစရာကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့က ကျွန်မတို့ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာပြောနိုင်မလဲ? ကျွန်မတို့ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးတိရစ္ဆာန်ဟာ ကျွန်မတို့ဘယ်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိသာထင်ရှားစေပါတယ်။ သင့်အကြိုက်ဆုံးသတ္တဝါတစ်ကောင်ကောင်က ပြောပြမယ့် သင့်ဘယ်သူဆိုတဲ့ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကြောင်းကို ဆက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်။ ၁။...